नागरिक एप चलाउँदा डाटा शुल्क नलाग्ने बनाईँदै, सञ्चार मन्त्रालयको नियमनकारीलाई निर्देशन - Technology Khabar
» नागरिक एप चलाउँदा डाटा शुल्क नलाग्ने बनाईँदै, सञ्चार मन्त्रालयको नियमनकारीलाई निर्देशन
हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको नागरिक एप चलाउँदा मोबाइल डाटामा कुनै शुल्क नलाग्ने गरि उपलब्ध हुने भएको छ । सो एप चलाउँदा हाल विभिन्न मोबाइल कम्पनीका डाटाबाट शुल्क काटिने भएको भएपनि सरकारले भने निशुल्क रुपमा एप चलाउन सकिने बनाउन लागेको हो।
यसको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमनकारी निकायलाई निर्देशन दिँदै सो एप कुनैपनि मोबाइल सेवा प्रदायकको नेटवर्कबाट प्रयोग गर्दा डाटा निशुल्क हुने बनाउन भनेको हो।
मन्त्रालयले केहि दिनअघि नागरिक एप चलाउँदा कुनै शुल्क नकाटिने बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसैगरि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई समेत त्यसको लागि व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले केहि दिनअघि नै नागरिक एप प्रयोग गर्दा डाटा रकम नकाटिने बनाउन सकिने बारेमा नियमनकारी निकायलाई निर्देशन दिएको बताए।
‘सरकारले ल्याएको नागरिक एपलाई सबैले प्रयोग गरुन र पेपरलेस गभर्नमेन्टको अवधारणालाई अगाडि बढाउन सजिलो बनाउनका लागि निर्देशन दिएको हो,’ सचिव बस्यालले भने ।
उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिएर सहजीकरण गर्ने र भविश्यमा नागरिक एप चलाउँदा कुनै रकम नकाटिने बताए। प्राधिकरणले निजी सेवा प्रदायकहरुसँग छलफल गरेर एप प्रयोग गर्दा संभव भएसम्म कसरी निशुल्क बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हेर्ने उनको भनाई थियो ।
त्यसैगरि डिजिटल नेपालको अभियानलाई अगाडी बढाउन समेत सो एपको महत्व रहेको भन्दै सचिव बस्यालले डिजिटल नेपालको लागि समेत बृहतरुपमा काम भईरहेको जानकारी दिए ।
यसबारेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने कुनै पत्र मन्त्रालयबाट नआईसकेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सो पत्र हालसम्म नआएको र कस्तो निर्देशन छ भन्ने पत्र आएपछि मात्र सो बारेमा थाहा हुने बताए ।
‘हामीलाई हालसम्म कुनै पत्र आएको जानकारी छैन्, नागरिक एप चलाउँदा डाटा शुल्क कसरी निशुल्क बनाउने हो त्यसबारेमा बुझ्नै पर्दछ,’ उनले भने ।
नेपाल टेलिकमले भने हाल सरकारी वेबसाइटहरु चलाउन कुनै शुल्क नलाग्ने प्रावधान गरेअनुसार र सो निशुल्क सेवा दिईरहेको जस्तै अवधारणामा लैजाने तयारी गरेको बताईएको छ ।
शाओमीले १०८ मेगापिक्सेलसहितको पहिलो फोल्डेबल स्मार्टफोन ल्याउँदै
प्रयोगकर्ताको फोटो चोरी गर्ने २९ वटा एप्स भेटिए, कतै तपाईँले पनि प्रयोग गरिरहनुभएको त छैन् ?
एनसेलको पहिलो सिम योजना, एसईई परीक्षार्थीहरुका लागि विशेष अफर
युगद्रष्टा एप सार्वजनिक, डा. निर्मलमणि अधिकारीका पुस्तकहरु एपमै पढ्न पाईने